बसाइँ सरेको २२ वर्षपछि गाउँ फर्केर कृषिमा रमाउँदै ‘नेपाल’, वार्षीक ५० लाख कमाउने लक्ष्य
वाई राज विष्ट , २०७७ माघ ६, मङ्गलबार,०१:२९:PM
भोजपुर, ६ माघ । धेरै मानिसहरु सेवा सुविधाको खोजीमा शहरतिर बसाइँ सर्छन् । यसरी हिडेका मानिसहरु पुनः आफ्नै जन्मथलोमा फर्किएका कमै उदाहरण भेटिन्छन् । तर भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका – ८ गोगने सल्लेनीका कृषक शम्भु नेपाल भने २२ वर्ष विराटनगरमा बिताएर गाउँमा फर्केर व्यवसायीक खेतीमा लाग्नु भएको छ । व्यवसाय गर्नको लागि विराटनगरमा रहेको घरलाई बिक्री गरेर गाउँ आएको उनको भनाइ छ । नेपालले जिल्लामा पहिलो पटक यसको खेती लगाएका हुन् ।
कृषक नेपालले अहिले आफ्नो पुर्खौली भुमिमा २२ रोपनी क्षेत्रफलमा डा«गन फल र १८ रोपनी क्षेत्रफलमा कागतीको व्यवसायीक खेती गरिरहनु भएको छ । नेपालले एक हजार बोट कुरिलो, एभोकाडो लगायतका विरुवा समेत लगाएका छन् ।
उनले दानाबोटे फलफूल तथा कृषि फर्ममा अहिले एक हजार ५०० बढी पिलरमा ड्रागन फल लगाएका छन् भने दुई हजार ५०० पिलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ खेतीलाई थप विस्तार गरिरहेको नेपालले बताए । नेपालले ३ वर्ष अघिबाट भोजपुरमा पहिलो पटक ड्रागन फलको व्यवसायीक खेती गर्न थालेको बताउनुभयो । अहिले उहाँको फर्ममा रहेको ड्रागनले फल दिन शुरु गरेको छ ।
कृषक नेपालले भने,‘ म २२ वर्षपछि पुन ः गाउँ फर्केर व्यवसायीक कृषिमा लागेको छु, अहिले मैले ४० रोपनी बढी क्षेत्रफलमा ड्रागन फलसंगै कागतीको व्यवसायीक खेती गरिरहेको छु, शुरुमा गाउँमा फर्केर आएर व्यवसायीक रुपमा खेती गर्दा यहाँका साथीहरुले धेरै थरीका कुरा गरे, वौलायो भने पैसा धेर भएर यस्तो गर्दैछ भने तर अहिले मैले ड्रागनको खेती गरेको देखेर अन्य साथीहरुले पनि खेती गर्दै आएका छन् ।’
नेपालले ड्रागन फलको खेतीका लागि मात्र हालसम्म रु. १५ लाख बढी खर्च गरिसकेको बताउनुभयो । गतवर्षबाट सामान्य रुपमा त्यसले फलदिन थालेको उनले बताए । उनले ड्रागन खेतीबाट बार्षीक ५० लाख आम्दानी लिने लक्ष्य राखेका छन्। उनले भारतबाट यसको विरुवा ल्याएर खेती थालेको जानकारी दिए ।
अहिले आफैले पनि यसको विरुवा उत्पादन थालेको समेत जानकारी दिए । ड्रागन फल लागेको ४५ दिनमा खान मिल्ने उनले जानकारी दिए । यसको मुल्य स्थानीय बजारमा सात सयदेखी एक हजारसम्म रहेको उनले बताए ।
कृषक नेपालले भने,‘ मैले बार्षीक ५० लाख बढी आम्दानी लिने लक्ष्य लिएको छु, त्यस लक्ष्य पुरा गर्न मलाई समस्या छैन, मैले १५ सय विरुवा लगाएको छु त्यसलाई २५ सय पु¥याउने गरी खेती विस्तार पनि गरिरहेको छु ।’
गत वर्ष कागती विक्रीबाट रु. १० लाख आम्दानी गरेको बताए । कोभिडका कारण यस वर्ष भने विक्री वितरणमा समस्या भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष मैले रु.१० लाख बराबरको कागती विक्री गरे । रु.तीन लाख बराबरको कागती स्थानीय बजारमा विक्री भयो भने, बाँकी काठमाण्डौमा लगेर बिक्री गरे । भोजपुरबाट आएको आर्गानिक कागती भनेपछि यसको काठमाण्डौमा पनि बजार राम्रो छ ।’
व्यवसायीक रुपमा खेती गरिरहेको भएपनि राज्यको तर्फबाट सहयोग नपाएको नेपालले गुनासो गर्नुभयो । आफूले गरिरहेको कामको धेरैले प्रशंसा गरेपनि अन्य सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । नेपालले भने,‘मैले खेती गरेको देखेर हौसला दिने धेरै छन्, खास सहयोग पाएको छैन् । मैले बैंकबाट कृषी ऋण लिएर व्यवसाय थालेको हो, मैलेपनि राज्यलाई केहि दिन सकेको छैन, फर्मसम्म आउनको लागि सडक नहुँदा डोकोमा बोकेर बस भएको ठाउँसम्म लैजाने गरेको छु, मैले राम्रो काम गर्न सकेभने सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग आउला नि त ? अहिले मेरो एक मात्र लक्ष्य भनेको वर्षीक ५० लाख आम्दानी सुनिश्चित गर्ने नै हो ।’
उनले गाउँका अन्य कृषकलाई समेत व्यवसायीक कृषिमा लाग्ने हौसला दिँदै आएको बताए । उनले गाउँमा उत्पादन भएको दुधलाई बजारसम्म पु¥याउनको लागि पहल समेत थालेको जानकारी दिए । विभिन्न ठाउँमा दुध संकलन केन्द्र स्थापना गरेर दुधलाई बजारसम्म लैजानको लागि काम गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषक नेपालले भने,‘ हाम्रो ठाउँमा दुधको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ, तर गाउँघरमा उत्पादन भएको दुधले मुल्य पाउन सकेको छैन, दुधलाई बजारमा पु¥याएर विक्री गर्न सकेमा यहाँका हजारौँ कृषकलाई लाभ पुग्छ, दुध संकलन केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक कागजात तयार गरेर स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरिरहेको छु ।’